Steve Jobs ဆီက ဘာတွေအတုယူမလဲ ? – Gentleman Magazine
Steve Jobs ကို Apple ရဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူ၊ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်သူ၊ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အနေနဲ့ အများစုက သိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Steve Job အကြောင်းကို ကြားလိုက်ရတာနဲ့ ဘာတွေက သင့်ကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်သွားစေနိုင်သလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူ့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ Steve Jobs: Man in the Machine အမည်ရ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ Steve Jobs ရဲ့ အားနည်းချက်တွေရော၊ အားသာချက်တွေကိုပါ ဖော်ညွှန်းထားပြီး အမှောင်ဘက်နှင့်အလင်းဘက်နှစ်ခုစလုံးကို ရိုက်ကူးပြထားပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ Steve Jobs ကို ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်၊ ထူးခြားထက်မြက်သူတစ်ဦးအဖြစ် ယုံကြည် လက်ခံနေကြပေမယ့်လည်း သူ့ဆီကနေ အလုံးဆုံကို အတုယူသင့်မသင့်ဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအတွက် Steve Jobs ဆီကနေ အတုယူသင့်တာတွေနဲ့ မယူသင့်တာတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ အနုပညာရသကို အသိအမှတ်ပြုလက်ခံပြီး တိုးတက်တီထွင်လိုစိတ်ပြင်းထန်ခြင်း
Jobs ဟာ ရှေးရိုးစွဲပုံစံတွေက ဖောက်ထွက်ပြီး စွဲမက်စရာကောင်းအောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ iPods တွေရဲ့ တောက်ပတဲ့အရောင်တွေနဲ့ MacBooks ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ ချောမွတ်ပြောင်လက်နေတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေက ဟန်ပန်အပြည့်နဲ့ ခမ်းနားလွန်းလှပါတယ်။ ဒီလို အရမ်းလန်းတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ၊ အရောင်တွေကြောင့်လည်း လူတွေက ၀ယ်ယူပိုင်ဆိုင်ချင်တတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ထုတ်ကုန်တွေကို ပိုကောင်းလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာက Jobs က အမြဲတမ်း စဉ်းစားနေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ချင်တဲ့ သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒက သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို စိတ်ရှုပ်သွားစရာဖြစ်သွားပေမယ့် ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲ အဆင့်မြင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုလည်း အရောင်းစင်မြင့်ပေါ်မှာ ဘယ်လိုပုံစံရှိနေလဲဆိုတာ တွေးကြည့်ပါ။ ၀ယ်သူတွေရဲ့ စိတ်ကို ဆွဲဆောင်ညှို့ငင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုရင် ရောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ အခုကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုရောင်းကောင်းနေသည့်တိုင်အောင် နောက်ထပ်ပိုကောင်းတာတစ်ခု ဖန်တီးဖို့ကို အမြဲတွေးနေဖို့ လိုပါတယ်။
ချုံ ကြားမှ တတ်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ သန်းကြွယ်သန်းကြွယ်သူဌေး
၂။ အရောင်းနှင့် ဈေးကွက်ပညာ အရည်အချင်း
Steve Jobs ဟာ သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ၀ယ်ချင်လာအောင် စွဲဆောင်ရာမှ ပါရမီရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူက အက်စကီးမိုးတွေကိုတောင်မှ ရေခဲဝယ်ချင်အောင် ရောင်းတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ကို အရောင်းသမားကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ Steve Jobs တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းသစ် မိတ်ဆက်ပွဲတွေမှာဆိုရင် အစပိုင်းမှာ အေးတိအေးစက်ဖြစ်သလိုရှိပေမယ့် အဆုံးသတ်ချိန်မှာတော့ တကယ်ကို ခံစားမှုသက်ဝင်ပြီး သက်တောင့်သက်သာနဲ့ တင်ဆက်သွားနိုင်တာကို တွေ့ရမှာပါ။
သင့်အနေနဲ့ အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုကို ဈေးကွက်ရှာဖွေပြီး ၀ယ်သူလက်ထဲရောက်သွားအောင် ရောင်းချနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
၃။ အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အရေးပါမှုကို နားလည်ခြင်း
နည်းပညာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ IBM ကုမ္ပဏီက ဦးဆောင်နေချိန်မှာ Apple တမူထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဈေးကွက်အတွင်း ၀င်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Think Different ဆိုတဲ့ Apple ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း အနောက်တိုင်းဝတ်စုံဝတ်ပြီးပြီး မျက်မှန်တပ်ထားတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ဘေးမှာ သရုပ်ဆောင်မင်းသား Justin Long ကို ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ တီရှပ်ဝတ်ထားတဲ့ ပုံနဲ့ ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အမှတ်တံဆပ်ကို ကြော်ငြာတဲ့ နည်းလမ်းက အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၀ယ်ယူသူတွေက ထူးခြားဆန်းသစ်မှုကို ခံစားရပြီး Apple ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲလာကြပါတယ်။
Steve Jobs ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့ကိုယ်သူ အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ သူဝတ်နေကျပုံစံဖြစ်တဲ့ အနက်ရောင် အင်္ကျီနဲ့ အပြာရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီကို အားလုံးက မှတ်မိလွယ်ကြပါတယ်။ Steve Jobs ဟာ သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်ကို ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ခဲ့သလို ကုမ္ပဏီရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်း ထင်ဟပ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အားလုံးကသိသွားစေမယ့် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဟာ စွန့်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တွေအားလုံးအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
Steve Jobs ဟာ သူ့ရဲ့အကြီးဆုံးကလေးရဲ့ ဖခင်အမည်ခံဖို့ကို ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Securities Exchange Commission က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာလည်း သူတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းတွေကို ငြင်းဆိုရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ အခြားအမှုဆောင်တွေအားလုံး ၀န်ခံခဲ့ပေမယ့် Steve Jobs ကတော့ ငြင်းမြဲငြင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုတာဝန်မဲ့တတ်တာမျိုးကိုတော့ အတုမယူသင့်ပါဘူး။ သင့်ဦးဆောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းမှာ ဖြစ်လာသမျှအကြောင်းတွေအားလုံးကို တာဝန်သိသိနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပါ။
Steve Jobs ဟာ SEC က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာတင် အတ္တကြီးကြီးနဲ့ ကိုယ်လွတ်ရုန်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကားမှာ လိုင်စင်နံပတ်ပြားတပ်လေ့မရှိသလို ယာဉ်မရပ်ရနေရာတွေမှာလည်း ကားကို တမင်ရပ်ထားခဲ့လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Steve Jobs ဟာ သူတစ်ကိုယ်ရည်သုံးစွဲဖို့အတွက် ကုမ္ပဏီအသုံးစရိတ်နဲ့ ဂျက်လေယာဉ်တစ်စီးဝယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် အတွက် အသိအမှတ်ပြုပေးသင့်တာ မှန်ပေမယ့် အပိုတွေတောင်းဆိုတာကတော့ အတ္တပဲဖြစ်ပါတယ်။
Steve Jobs ဟာ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကောင်းပေမယ့် အခြားသူတွေအတွက် ကိုယ်ချင်းစာပေးနိုင်စွမ်းတော့ မရှိသလောက်ကို နည်းပါးသူဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလောကမှာ ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေများပြီး စစ်ပွဲတစ်ခုလို မဟာဗျူဟာတွေ နည်းဗျူဟာတွေနဲ့ လှုပ်ရှားရတယ်ဆိုပေမယ့် သနားကြင်နာမှုရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ Steve Jobs ကတော့ Apple ကို စတင်မတည်ထောင်ခင်ကတည်းကစပြီး သူ့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ သနားညှာတာမှုကင်းမဲ့ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ် လုပ်ငန်းတွဲဖက် လုပ်ကိုင်သူလည်းဖြစ်တဲ့ Steve Wozniak ပေါ်မှာလည်း တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီး အရမ်းအောင်မြင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုဟ်တွေကို ကြည့်ပြီး အတုယူတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကို သေချာလေ့လာပြီးမှ ယူသင့်တာကိုပဲ ယူဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Steve Jobs ဆီက ဘာတှအေတုယူမလဲ ?
Steve Jobs ကို Apple ရဲ့ပူးတှဲတညျထောငျသူ၊ ထူးခြှနျထကျမွကျတဲ့ ဆနျးသဈတီထှငျသူ၊ ခေါငျးဆောငျတဈဦး အနနေဲ့ အမြားစုက သိထားပွီးသားဖွဈမှာပါ။ Steve Job အကွောငျးကို ကွားလိုကျရတာနဲ့ ဘာတှကေ သငျ့ကို လှမျးမိုးခြုပျကိုငျသှားစနေိုငျသလဲ စဉျးစားကွညျ့ပါ။ သူ့အကွောငျးကို ရိုကျကူးထားတဲ့ Steve Jobs: Man in the Machine အမညျရ မှတျတမျးရုပျရှငျထဲမှာတော့ Steve Jobs ရဲ့ အားနညျးခကျြတှရေော၊ အားသာခကျြတှကေိုပါ ဖျောညှနျးထားပွီး အမှောငျဘကျနှငျ့အလငျးဘကျနှဈခုစလုံးကို ရိုကျကူးပွထားပါတယျ။ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ Steve Jobs ကို ထိပျတနျးခေါငျးဆောငျ၊ ထူးခွားထကျမွကျသူတဈဦးအဖွဈ ယုံကွညျ လကျခံနကွေပမေယျ့လညျး သူ့ဆီကနေ အလုံးဆုံကို အတုယူသငျ့မသငျ့ဆိုတာကို စဉျးစားကွညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီအတှကျ Steve Jobs ဆီကနေ အတုယူသငျ့တာတှနေဲ့ မယူသငျ့တာတှကေို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ အနုပညာရသကို အသိအမှတျပွုလကျခံပွီး တိုးတကျတီထှငျလိုစိတျပွငျးထနျခွငျး
Jobs ဟာ ရှေးရိုးစှဲပုံစံတှကေ ဖောကျထှကျပွီး စှဲမကျစရာကောငျးအောငျ ဒီဇိုငျးထုတျထားတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ဖနျတီးခဲ့ပါတယျ။ iPods တှရေဲ့ တောကျပတဲ့အရောငျတှနေဲ့ MacBooks ကှနျပြူတာတှရေဲ့ ခြောမှတျပွောငျလကျနတေဲ့ ဒီဇိုငျးတှကေ ဟနျပနျအပွညျ့နဲ့ ခမျးနားလှနျးလှပါတယျ။ ဒီလို အရမျးလနျးတဲ့ ဒီဇိုငျးတှေ၊ အရောငျတှကွေောငျ့လညျး လူတှကေ ဝယျယူပိုငျဆိုငျခငျြတတျကွတာဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခကျြက ထုတျကုနျတှကေို ပိုကောငျးလာအောငျ ဘယျလိုလုပျမလဲဆိုတာက Jobs က အမွဲတမျး စဉျးစားနတေတျသူဖွဈပါတယျ။ အရာရာကိုပွီးပွညျ့စုံအောငျလုပျခငျြတဲ့ သူရဲ့စိတျဆန်ဒက သူ့ပတျဝနျးကငျြက လူတှကေို စိတျရှုပျသှားစရာဖွဈသှားပမေယျ့ ဒီစိတျကွောငျ့ပဲ အဆငျ့မွငျ့တီထှငျဆနျးသဈမှုတှကေို လုပျဆောငျနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ထုတျကုနျပစ်စညျးကိုလညျး အရောငျးစငျမွငျ့ပျေါမှာ ဘယျလိုပုံစံရှိနလေဲဆိုတာ တှေးကွညျ့ပါ။ ဝယျသူတှရေဲ့ စိတျကို ဆှဲဆောငျညှို့ငငျနိုငျစှမျးမရှိဘူးဆိုရငျ ရောငျးရမှာမဟုတျပါဘူး။ ပွီးတော့ အခုကုနျပစ်စညျး တဈခုရောငျးကောငျးနသေညျ့တိုငျအောငျ နောကျထပျပိုကောငျးတာတဈခု ဖနျတီးဖို့ကို အမွဲတှေးနဖေို့ လိုပါတယျ။
ခြုံ ကွားမှ တတျလှမျးလာခဲ့တဲ့ သနျးကွှယျသနျးကွှယျသူဌေး
၂။ အရောငျးနှငျ့ ဈေးကှကျပညာ အရညျအခငျြး
Steve Jobs ဟာ သူ့ရဲ့ထုတျကုနျပစ်စညျးတှကေို ဝယျခငျြလာအောငျ စှဲဆောငျရာမှ ပါရမီရှငျတဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူက အကျစကီးမိုးတှကေိုတောငျမှ ရခေဲဝယျခငျြအောငျ ရောငျးတတျသူဖွဈပါတယျ။ တကယျကို အရောငျးသမားကောငျး တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ Steve Jobs တငျဆကျခဲ့တဲ့ ပစ်စညျးသဈ မိတျဆကျပှဲတှမှောဆိုရငျ အစပိုငျးမှာ အေးတိအေးစကျဖွဈသလိုရှိပမေယျ့ အဆုံးသတျခြိနျမှာတော့ တကယျကို ခံစားမှုသကျဝငျပွီး သကျတောငျ့သကျသာနဲ့ တငျဆကျသှားနိုငျတာကို တှရေ့မှာပါ။
သငျ့အနနေဲ့ အောငျမွငျခငျြတယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ထုတျကုနျပစ်စညျး ဒါမှမဟုတျ ဝနျဆောငျမှုကို ဈေးကှကျရှာဖှပွေီး ဝယျသူလကျထဲရောကျသှားအောငျ ရောငျးခနြိုငျဖို့လိုပါတယျ။
၃။ အမှတျတံဆိပျရဲ့အရေးပါမှုကို နားလညျခွငျး
နညျးပညာလုပျငနျးနယျပယျမှာ IBM ကုမ်ပဏီက ဦးဆောငျနခြေိနျမှာ Apple တမူထူးခွားတဲ့နညျးလမျးတှနေဲ့ ဈေးကှကျအတှငျး ဝငျရောကျလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ Think Different ဆိုတဲ့ Apple ရဲ့ ဆောငျပုဒျအတိုငျး အနောကျတိုငျးဝတျစုံဝတျပွီးပွီး မကျြမှနျတပျထားတဲ့ လူကွီးတဈယောကျဘေးမှာ သရုပျဆောငျမငျးသား Justin Long ကို ဂငျြးဘောငျးဘီ၊ တီရှပျဝတျထားတဲ့ ပုံနဲ့ ကွျောငွာခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို အမှတျတံဆပျကို ကွျောငွာတဲ့ နညျးလမျးက အလုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဝယျယူသူတှကေ ထူးခွားဆနျးသဈမှုကို ခံစားရပွီး Apple ကုနျပစ်စညျးတှကေို ဝယျယူသုံးစှဲလာကွပါတယျ။
Steve Jobs ကိုယျတိုငျကလညျး သူ့ကိုယျသူ အမှတျအသားတဈခုဖွဈလာစခေဲ့ပါတယျ။ သူဝတျနကေပြုံစံဖွဈတဲ့ အနကျရောငျ အင်ျကြီနဲ့ အပွာရောငျဂငျြးဘောငျးဘီကို အားလုံးက မှတျမိလှယျကွပါတယျ။ Steve Jobs ဟာ သူ့ရဲ့ ပုံရိပျကို ကိုယျတိုငျပုံဖျောခဲ့သလို ကုမ်ပဏီရဲ့ပုံရိပျကိုလညျး ထငျဟပျစခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီလို အားလုံးကသိသှားစမေယျ့ အမှတျတံဆိပျဖွဈအောငျ လုပျဆောငျနိုငျခွငျးဟာ စှနျ့ဦးစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ တှအေားလုံးအတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။
Steve Jobs ဟာ သူ့ရဲ့အကွီးဆုံးကလေးရဲ့ ဖခငျအမညျခံဖို့ကို ငွငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Securities Exchange Commission က စုံစမျးစဈဆေးမှုတှမှောလညျး သူတာဝနျယူထားတဲ့အပိုငျးတှကေို ငွငျးဆိုရှောငျရှားခဲ့ပါတယျ။ အခွားအမှုဆောငျတှအေားလုံး ဝနျခံခဲ့ပမေယျ့ Steve Jobs ကတော့ ငွငျးမွဲငွငျးနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီလိုတာဝနျမဲ့တတျတာမြိုးကိုတော့ အတုမယူသငျ့ပါဘူး။ သငျ့ဦးဆောငျနတေဲ့ လုပျငနျးမှာ ဖွဈလာသမြှအကွောငျးတှအေားလုံးကို တာဝနျသိသိနဲ့ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးပါ။
Steve Jobs ဟာ SEC က စုံစမျးစဈဆေးမှုမှာတငျ အတ်တကွီးကွီးနဲ့ ကိုယျလှတျရုနျးခဲ့တာမဟုတျပါဘူး။ သူ့ကားမှာ လိုငျစငျနံပတျပွားတပျလမေ့ရှိသလို ယာဉျမရပျရနရောတှမှောလညျး ကားကို တမငျရပျထားခဲ့လရှေိ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Steve Jobs ဟာ သူတဈကိုယျရညျသုံးစှဲဖို့အတှကျ ကုမ်ပဏီအသုံးစရိတျနဲ့ ဂကျြလယောဉျတဈစီးဝယျပေးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ဖူးပါသေးတယျ။ လုပျငနျးစှမျးဆောငျရညျ အတှကျ အသိအမှတျပွုပေးသငျ့တာ မှနျပမေယျ့ အပိုတှတေောငျးဆိုတာကတော့ အတ်တပဲဖွဈပါတယျ။
Steve Jobs ဟာ အာရုံစူးစိုကျနိုငျစှမျးကောငျးပမေယျ့ အခွားသူတှအေတှကျ ကိုယျခငျြးစာပေးနိုငျစှမျးတော့ မရှိသလောကျကို နညျးပါးသူဖွဈပါတယျ။ စီးပှားရေးလောကမှာ ယှဉျပွိုငျတိုကျခိုကျမှုတှမြေားပွီး စဈပှဲတဈခုလို မဟာဗြူဟာတှေ နညျးဗြူဟာတှနေဲ့ လှုပျရှားရတယျဆိုပမေယျ့ သနားကွငျနာမှုရှိဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။ Steve Jobs ကတော့ Apple ကို စတငျမတညျထောငျခငျကတညျးကစပွီး သူ့ဘဝတဈလြှောကျလုံးမှာ သနားညှာတာမှုကငျးမဲ့ခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူ့ရဲ့ငယျသူငယျခငျြးလညျးဖွဈ လုပျငနျးတှဲဖကျ လုပျကိုငျသူလညျးဖွဈတဲ့ Steve Wozniak ပျေါမှာလညျး တဈကိုယျကောငျးဆနျတဲ့ လုပျရပျတှေ အမြားကွီး ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီအခကျြတှကေိုကွညျ့ပွီး အရမျးအောငျမွငျနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုဟျတှကေို ကွညျ့ပွီး အတုယူတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့အားသာခကျြအားနညျးခကျြတှကေို သခြောလလေ့ာပွီးမှ ယူသငျ့တာကိုပဲ ယူဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
Previous: ဖွင့်ဟမတောင်းဆိုဝံ့သည့် ကိစ္စများ
Next: တိုင်းပြည်က သင့်ကို ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲလို့ မေးမယ့်အစား.. တိုင်းပြည်အတွက် သင်ဘာပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာပဲ မေးပါ